Home Wararka Imaaraadka iyo Soomaaliya oo kawada shaqayn doona la-dagaalanka dembiyadda maaliyadeed
Imaaraadka iyo Soomaaliya oo kawada shaqayn doona la-dagaalanka dembiyadda maaliyadeed
Sida ay shaacisat dowlada Imaaraadka waaxda Sirdoonka Maaliyadda ee marka loo soo gaabiyo (UAE FIU) ayaa waxay heshiis Is-faham (MoUs) kala saxixideen Xarunta Warbixinta Maaliyadda ee Somalia (FRC). Dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa heshiiskaan isaga kaashan doona La-dagaalanka Dembiyadda Maaliyadeed, Lacagaha la dhaqo iyo Dhaqaalaha loo xawilo waxa ay ugu yeeraan Kooxaha Argagixisada.
Heshiiskaan ayaa ah mid ay wada saxiixeen wadamada caalamka oo dhan, mana aha mid wax ka badalalaya xiriirka ka dhaxeeya labada wadan, kaas oo in mudo ah xumaam mana la filayo in ay wax iska badalaan xirirkaas inta Farmaajo dalka madaxweyne ka yahay.
Sida aynu ka soo xiganay Wakaalladda Wararka Imaaraadka ee WAM waxaa Heshiiskaasi Is-Faham wada saxiixay Madaxa Waaxda Sirdoonka Maaliyadda ee Imaaraadka (UAE FIU), Cali Fasal Ba Calaawi, halka ay Somalia u saxixiday gaasimaha Xarunta Warbixinta Maaliyadda (FRC), Aamina Cali.
Dhanka kale heshiskaan ayaa waxa uu dhibaato dhaqaale iyo mid ganacsi gaarsiin doonaa ganacsatada Soomaaliyeed ee lacagahooda u kala dira caalamka. Waxaana macquul ah in ganacsato badan oo Soomaali ah albaabada laga soo xiro.